Ụlọ ọrụ na-ebukọ chocolate, igwe na-ebukọ chocolate - igwe LST
Igwe nkwakọ ngwaahịa bụ ụdị igwe nke na-ebu ngwaahịa, nke na-arụ ọrụ nchebe na ịma mma. The nkwakọ ngwaahịa na-ekewa n'ime mgbakọ-akara n'ozuzu mmepụta nkwakọ ngwaahịa na ngwaahịa mpụta nkwakọ ngwaahịa. The akpaaka akara nkwakọ usoro maka imewe na echichi mma na àgwà ngwaahịa na mmepụta arụmọrụ nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
Kedu ihe bụ igwe nkwakọ ngwaahịa?
Igwe nkwakọ ngwaahịa bụ aha n'ozuzu nke mmepụta ngwaahịa na igwe mpụpụ, a na-ekewa ya na akụkụ abụọ:
1.Assembly-line mmepụta nkwakọ, a na-ejikarị na akpa ma ọ bụ karama na nri, ọgwụ, kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ndochi ngwaahịa, igwe mkpuchi, nzuzo, wdg. Ọ na-agụnyekarị: mmiri mmiri, tapawa, igwe na-ejuputa, nkwakọ ihe ohiri isi. igwe, ntụ ntụ granule nkwakọ ngwaahịa, wdg.
2.Product peripheral nkwakọ ngwá ọrụ, ọ bụ tumadi na-eji mgbe mmepụta nke ngwaahịa, ịgba, iti mmepụta ụbọchị, akara, ịda mbà film, etc.It bụ tumadi gụnyere: ndochi igwe, sealing igwe, ngwa nbipute, nkwakọ igwe, agụụ igwe, shrinking igwe, agụụ mbukota igwe, wdg.
Kedu ihe bụ njirimara igwe nkwakọ ngwaahịa?
A na-eji igwe nkwakọ ngwaahịa eme ihe n'ọtụtụ ebe. Dị ka: Nri, kemịkalụ, ọgwụ, ụlọ ọrụ ọkụ dị n'ahịa ka a na-eji igwe nkwakọba ihe niile.
Arụ ọrụ dị mfe ma dị mfe iji. Ọtụtụ igwe nkwakọ ngwaahịa zuru oke, ọ na-emecha ọtụtụ usoro n'otu oge, dị ka: dọpụta akpa-akpa na-ejuputa koodu-na-agụta nha-akara-eziga ngwaahịa.Ọ nwekwara ike ịtọ na-enweghị ọrụ, zọpụta ọrụ.
High arụ ọrụ arụmọrụ na nnukwu mmepụta.We nwere ike customzied igwe dị ka ahịa reuqest mmepụta ikike.
Dị ọcha, ịdị ọcha na ike-azọpụta.Ọcha na ịdị ọcha na-eji igwe nkwakọ ngwaahịa, ọ dịghị mkpa maka ọrụ ntuziaka, n'otu oge ahụ, ọ nwere ọrụ nke ịchekwa ihe, nchekwa ego na nchebe gburugburu ebe obibi.
Gịnị bụ mbukota ohiri isi?
Ohiri isi nkwakọ igwe bụ a na-aga n'ihu nkwakọ igwe na nnọọ ike nkwakọ ikike na adabara dị iche iche nkọwa maka nri na-abụghị nri nkwakọ, ọ dị ka a ohiri isi.It ike ga-eji ọ bụghị naanị maka nkwakọ na-enweghị ụghalaahịa nkwakọ ihe, kamakwa maka elu- nkwakọ ngwa ngwa site na iji ihe mpịakọta ebipụtaburu.
Kedu ihe bụ isi mkpọkọ ohiri isi?
1.Servo motors, na njikwa PLC.
2.Automatic nri maka ahịrị ngwugwu zuru ezu.
3.Automatic belt ọsọ ukpụhọde, na eriri igbapu na adaba.
4.Bag ogologo nwere ike ịtọ na bee na otu nzọụkwụ, na-azọpụta oge na ihe nkiri.
5.All njikwa na-ghọtara site software, mfe maka ọrụ ukpụhọde na teknuzu kwalite.
Kedu ka usoro ọrụ nke igwe nkwakọ ngwaahịa si arụ ọrụ?
PLC njikwa, mgbanwe akpa ogologo ọnwụ, onye na-arụ ọrụ mkpa ka ịgbanwee nbudata na-arụ ọrụ, nnukwu mmepụta ikike, na-azọpụta oge na-azọpụta material.Buttoned mmadụ-igwe ihuenyo, Chinese ma ọ bụ English na-egosipụta, adaba na ngwa ngwa parameter settings.Self nchoputa ọdịda ọrụ, doro anya ọdịda. ngosi.
Igwe oyibo ụdị kwụ ọtọ
Chocolate na-ejide tank
Ahịrị Mmepụta Chocolate Oat-Nri akpaaka